यसरी एक वर्षमै लोकप्रिय बन्यो इ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस
काठमाडौं - इन्टरनेट र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत नेपालभर सामान ढुवानी सेवा र बाटोमा सवारी साधन बिग्रिए तुरुन्त मर्मत सेवा दिने इ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस स्थापनाको एक वर्ष पुरा भएको छ । वर्ष दिनको अवधिमा आफ्नो कम्पनीसंग ४ हजार ५ सय ३६ ट्रक र १०३ निजी फ्य...
काठमाडौं – बजाज पल्सर १२५ बाइक नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध छ । धेरैले रुचाउने पल्सरका सिरिज मध्ये १२५ सीसीको यो बाइक विशेष लोकप्रिय छ । बजाजको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले कुनै पनि बजाजका बाइक किन्दा पुरै नगद बुझा...
लक्जरी कारमा अनौठा १० फिचर : घडी, छाता, फ्रिज देखि डग मोड सम्म
कारमा हुने फिचरको बारेमा त सुनेकै हुन्छौ । कारको प्रकार अनुसार यसको फिचर पनि फरक फरक हुन्छ । सुरुवाती दिनमा पावर स्टेयरिङ र पावर विन्डो भएको कारलाई लक्जरी फिचरको रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसपछि कारमा एबीएस र एयरब्याग जस्ता फिचर कारमा समावेश हुन थाल्यो ।...
यसरी किन्नुस् मासिक १८ हजारमा ड्याटसन रेडी गो, शुरुमा ९ लाख ७५ हजार भए पुग्ने
काठमाडौं – ड्याटसन गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्पले हालै ल्याएको नयाँ योजना ‘बाइ नाउ पे इन २०२१’ अन्तर्गत सस्तो मूल्यमा रेडी गो कार किन्न पाइने भएको छ । ८ सय सीसीको रेडी गो नेपाली बजारमा उपलब्ध सस्तो गाडी मध्य...
काठमाडौं – युवाहरुले निकै नै रुचाएको होन्डाको बाइक एक्सआर १९०एल किन्नका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा सुविधा उपलब्ध छ । नेपालका लागि होन्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले एक्सआर १९०एल का लागि विशेष अफर उपलब्ध गराइरहेको छ । होन्डाले अन्य...
आज विश्व मोटरसाइकल दिवस : मोटरसाइकल राइडका लागि उपयुक्त छन् यी सडक
काठमाडौं – आज जुन २१ अर्थात विश्व मोटरसाइकल दिवस । कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण नेपाली बाइक राइडरहरुले कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्न पाएनन् । लकडाउन नभएको भए राइडरहरु विभिन्न कार्यक्रम गरेर विश्व मोटरसाइकल दिवस मनाउथे । यसै सन्दर्भमा...
इन्जिन कुलिङ सिस्टमले कसरी कार्य गर्छ ?
कार चलाउँदा इन्जिन तात्ने गर्छ । अति तातोपनले गर्दा कारको इन्जिनमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले इन्जिनलाई चिसो बनाइराख्नको लागि कारमा कुलिङ सिस्टम हुनु आवश्यक छ । साधारणतया यसमा पानीलाई एन्टिफ्रिज अर्थात् जाडोमा जम्न नदिने एक विशेष प्रकारको तरल वस्तुसँग...
१५ वर्ष पुग्यो मारुती सुजुकी स्विफ्ट, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
मारुती सुजुकीको स्विफ्ट कार निकै चर्चित कार हो । सो ह्याकब्याक कार भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको १५ वर्ष भइसकेको छ । सो कार २००५ मा भारतमा लन्च भएको थियो । सो कार हालसम्ममा २२ लाख युनिट बिक्री भइसकेको छ । सन् २००५ देखि हालसम्म सो कारको ३ जेनेरेसन मोडल...
ग्राहकको रोजाई अनुसार यसरी पाउन सकिन्छ स्किममा टीभीएस एनटर्क स्कुटर
नेपाली बजारमा तीन मोडलका टीभीएस एनटर्क स्कुटर उपलब्ध छन् ड्रम, डिस्क र रेस एडिसन । यी स्कुटरको मूल्य क्रमशः २ लाख १४ हजार ९ सय, २ लाख ३४ हजार ९ सय र २ लाख ४६ हजार ९ सय रुपैयाँ छ । टीभीएसको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले अहिले ल्याएको श...
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई लकडाउनले पारेको प्रभाव
नेपालमा यातायातको विकासक्रम ३ शताब्दीबाट निरन्तर हुदै आएको छ। पछिल्लो समयमा द्रुतगतिमा विकास भएको क्षेत्रमध्ये यातायात र संचार नै हो। यातायात भएन भने कुनै क्षेत्र विकास हुन सक्दैन। त्यसैले सडक र यातायातलाई विकासका पूर्वाधार मानिन्छ । भनिन्छ जुन देशम...
कारमा हुने अटोमेटिक ट्रान्समिसन : प्रकार र विशेषता
कारमा हुने अटोमेटिक ट्रान्समिसन विश्वभरका अधिकांश ड्राइभिङका लागि प्रमुख विकल्प हो । पहिलो पटक अटोमेटिक ट्रान्समिसन प्रयोग हुँदा सामान्य गियर परिवर्तन गर्ने संयन्त्रको रुपमा सुरु भएको थियो । लामो समयको प्रयास र विकाससँगै ट्रान्समिसन पनि विकास हुँदै ह...
नेपाली बजारमा बीवाईडीका तीन इलेक्ट्रिक गाडी उपलब्ध, विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन
बीवाईडीले नेपाली बजारमा दुई फरक रेन्जका गाडी ई६ र एम३ बिक्री–वितरणका लागि उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यसैगरी हालै इलेक्ट्रिक डेलिभरी भ्यान टी३ समेत उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रिक गाडीका लागि आवश्यक चार्जिङ सेवा समेत उपलब्ध गराइरहेको छ । नेपा...
१० वर्ष पहिले नै नेपाल भित्रिएको थियो सौरभ ज्योतिको यो हाइब्रिड कार, यसकारण छ विशेष
काठमाडौं – नेपालकै पहिलो हाइब्रिड कार होन्डा इन्साइट व्यवसायी सौरभ ज्योतिले करिव १० वर्ष पहिले नेपालमा ल्याएका थिए । उनले हालै सो कारको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । सौरभ ज्योतिको सो कार इन्टिग्रेटेड मोटर असिष्ट हाइब्रिड हो । य...
यसरी सर्भिसिङ हुँदैछन् गाडी आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा, सबै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
लकडाउनको समयमा पनि विभिन्न सवारी साधन कम्पनीका आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरुले अत्यावश्यक सवारी साधनलाई सर्भिसिङ सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पछि यस्ता सर्भिस सेन्टरमा विस्तारै सवारी साधनको चाप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यी सर्भ...
दैनिक २३ करोडको कारोबार हुने नेपाली अटो क्षेत्रमा अब १० लाख जनशक्तिको भविष्य के ?
नेपाली बजारमा गाडी आयातकर्ताहरुले अन्य देशबाट गाडी ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बजाज र टीभीएस जस्ता केही कम्पनीले नेपालमै बाइक एसेम्बल गर्न थाले पनि अधिकांश गाडी वा बाइक विदेशबाटै ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी विदेशबाट गाड...
वर्कशप खोल्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी पुरा गर्नुस् सुरक्षाका मापदण्ड
लकडाउन केही खुकुलो हुँदैछ । धेरै प्रकारका सवारी साधन सडकमा गुड्न थालेका छन् । यो अवस्थामा विस्तारै सवारी साधन मर्मत गर्ने सर्भिस सेन्टर र वर्कशपहरु पनि खुल्दै जाने छन् । तर वर्कशपहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु आवश्य...
लकडाउन छ । घरमा औषधि चाहिएको छ । यो समयमा सबैको सहयोगी बनेको छ । अनलाइन औषधि । फोन गरेर, इमेल गरेर वा म्यासेज पठाएर यी सबै कार्य गर्न सकिन्छ । अनलाइन औषधिका प्रतिनिधि घरैमा आइपुग्छन् । हाल यसरी घरैमा औषधि उपलब्ध गराउने धेरै अनलाइन सुविधा उपलब्ध छन्...
जेठ सम्म ५७४ इलेक्ट्रिक गाडी भित्रिए नेपालमा, यस्तो छ अन्य गाडीको अवस्था
काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को जेठ महिना सम्म नेपालमा ५ सय ७४ युनिट इलेक्ट्रिक गाडी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा ९३ इलेक्ट्रिक गाडी जाँचपास भएर नेपालमा भित्रिएका छन् । यो वर्ष सबैभन्दा...
कोरोना भाइरस संक्रमणको डरले गरिएको लकडाउनका कारण सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसाय ठप्प अवस्थामा छ । केही समय पछि नियन्त्रित रुपमा यो व्यवसाय पनि अवश्यक खुल्ने छ । तर के यो व्यवसाय पहिलेकै तरिकाले सामान्य अवस्थामा चल्न सक्ला ? खास गरी कम्पनी र ग्राहकका बीच...
नयाँ बाइकका लागि तयार हुनुस् : लकडाउन खुले पछि आउँदै छन् नयाँ मोडल र अफर
काठमाडौं – लकडाउन खुले पछि नयाँ बाइक वा स्कुटर किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? वा अहिले नै यसको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने अब तपाईका लागि उपयुक्त समय हुन सक्छ । लकडाउन खुले पछि केही कम्पनीले नयाँ बाइक र स्कुटर नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी...
के साँच्चिकै पुँजिपति वर्गहरुले मात्रै प्रयोग गर्छन् त इलेक्ट्रिक कार ?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा इलेक्ट्रिक कार माथि भारी मात्रामा कर वृद्धि गरिएसँगै अहिले इलेक्ट्रिक कार चर्चाको विषय बनेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य सहित अघि बढेको सरकार माथि यस्ता सवारी साधनमा भ...
सन् २०२१ मा विश्व बजारमा १० नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी आउँदै
नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीमा भन्सारको चर्चा चलिरहेको समयमा विश्व बजारमा भने सन् २०२१ मा शक्तिशाली इलेक्ट्रिक गाडीहरु आउने चर्चा चुलिएको छ । कम्पनीहरुले यसका लागि तयारी गरिरहेका छन् । सन् २०२१ मा इलेक्ट्रिक कारले अटो क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्या...
इलेक्ट्रिक गाडीको कर बढ्दा के भन्छन् व्यवसायीहरु ?
काठमाडौं – इलेक्ट्रिक गाडीको कर नयाँ बजेटमार्फत सरकारले बढाएको समयमा नेपालमा यस्ता गाडी बिक्री गरिरहेका कार कम्पनीहरुको कस्तो होला धारणा ? नेपालमा पहिले देखि महिन्द्राका इलेक्ट्रिक कार बिक्री गरिरहेको अग्नि इनर्जी प्रालिका एक्जिक्युटिभ सिनियर...
सामान ओसारपसार गर्नका लागि उपयुक्त जेनन पिकअप
पिक अप । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सामान ओसार्नका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले त यसमा रग्डनेस र राम्रो पर्फमेन्सको आवश्यकता पर्छ । यो वाहेक कम्फर्ट र राम्रो लुक्स भए सुनमा सुगन्ध हुन्छ । टाटाको जेनन पिकअपमा यी सबै कुराको संयोजन भएको कम्पनीको दाव...